War deg deg ah:Sheekh Shariif oo goor dhaw ku dhawaaqaya Ra'isalwasaraha – SBC
War deg deg ah:Sheekh Shariif oo goor dhaw ku dhawaaqaya Ra'isalwasaraha
Posted by editor on Juun 23, 2011 Comments
Wararka ka soo baxaya xarunta madaxtooyada dawlada KMG Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaw lagu dhawaaqayo Ra’isalwasaaraha cusub ee xukuumada KMG.
Ilo wargal ah oo ku sugan xarunta madaxtooyada ayaa SBC u xaqiijiyey in madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo qalinka ku duugay wareegto ay soo diyaariyeen xoghayntiisa oo ah magacaabista Ra’isalwasaaraha, iyadoo loo magacaabay Cabdi-Wali Maxamed Cali (Gaaz).
Waraaqda oo saxiixan oo uu arkey sarkaal ka tirsan xarunta madaxtooyada oo magaciisa in la xuso ka gaabsadey sababo inaan loo ogeyn in uu saxaafada warsiiyo ayaa SBC si hoose ugu sheegay in Madaxweynuhu uu kulan la leeyahay xiligan xildhibaano ka tirsan Baarlamanka KMG si ay codka kalsoonida u siiyaan Ra’isalwasaaraha cusub oo ay dhici karto in diimo kaga timaado qaar ka mid ah xildhibaanada.
Wariyaha SBC ee magaalada Muqdisgho oo ku sugan xarunta madaxtooyada ayaa soo sheegaya in qaybaha saxaafada gudaha & dibada looga yeeray xarunta madaxtooyada, iyadoo sidoo kale loo yeeray xildhibaano & marti sharaf kale oo fara badan oo goob joog ka ahaan doona ku dhawaaqista Ra’isalwasaaraha cusub.
Warka ayaa intaasi ku daraya in Ra’isalwasaaraha cusub marka la magacaabo uu soo dhisi doono gola wasiir iyadoo markaasi ka dibna la horgeyn doono xukuumadaais Baarlamanka.
Waxaan isku dayi doonaa inaan helno liiska xubnaha golaha wasiirada cusub waxaa jira warar hor u dhac ah oo sheegaya in liiska wasiirada ee uu soo gudbiyey Gudoomiyaah Baarlamanka inay ku jiraan wajiyo aan ku cusbeyn indhaha bulshada, kuwaasi oo laga yaabo in ay ka mid noqon karaan hogaamiye kooxeedyadii hore.
Warar dheeraad ah SBC Isha ku hay.